၁။ မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့် သ္မီးအသက်က ၃၀ပါရှင့် အိမ်ထောင်ကျတာ ၈ လထဲမှာပါရှင့် ခု ကိုယ်ဝန် ၁လပါ ငှက်ပျောသီးဖီးကြမ်းကိုကြော်ပြီး ပျားရည်နဲ့ စိမ်ပြီး စားတာ ကိုယ်ဝန် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါသလားရှင့်
ကိုယ်ဝန် + ကလေးနို့တိုက်သူတွေ အရင်စားဖူးတာအကုန် + လူအများစားသုံးတာ အကုန်နီးပါး စာသောက်နိုင်ကြ။
၂။ ဆရာရှင် သမီးအသက်၂၇ အိမ်ထောင်သည်ပါ ၁နှစ်နဲ့ ၈ လသားလေးတယောက်ရှိပါတယ် သားလေး ခုဆေးရုံတင်နေရပါတယ် အပြင်းဖျားပြီး တတ်သွားတာပါဆရာ သွေးစစ်တာလည်း ဘာမှမရှိပါဘူး ဒါပေမဲ့ အဖျားက တခါတလေပြန်တတ်လာလို့ဆရာဝန် က ကြောရိုး ချင်ဆီ(ချင်ဆီ -စလုံးအမှန်မသိပါမှားခဲ့ရင်ပြင်ပေးဖို့တောင်ပန်းပါရစေ) စစ်ရမယ် သဘောတူမတူ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါတယ် လက်မှတ်ထိုးတာနဲ့ စစ်မယ်ဆိုပါတယ် အဲ့တာ ဘာရောဂါ အတွက်စစ်တာလဲဆရာ စစ်ကြည့်ရင်ကလေးအတွက်ဘာဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သလဲ တချို့က ညဏ်ရည် နိမ့်တတ်တယ် ကိုယ်တခြမ်းသေတတ်တယ် ပြောကြလို့ပါ အဲ့တာဟုတ်ပါသလားဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ခါးရိုးထဲကအရေကို ဖေါက်ယူစစ်ဆေးနည်းဖြစ်တယ်။ ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောရောင်သလား သိဘို့ဖြစ်တယ်။
အဲ့တာ တခြား ဘယ်လိုနည်းနဲ့စစ်လို့ရလဲဆရာရောင်ခဲ့သည်ရှိသော် ဘယ်လိုလက်ခဏာပြလဲဆရာ စမ်းသပ် ကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တွေက လိုတာ ညွှန်ပါမယ်။ ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ + ဦးနှောက်အဖုံးလွှာရောင်ရောဂါ + အတက်ရောဂါစာတွေ ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်။
1. Bacterial Meningitis ဗက်တီးရီးယား ဦးနှောက်မြှေးရောင်ရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/bacterial-meningitis.html
2. Bacterial Meningitis ဗက်တီးရီးယား ဦးနှောက်မြှေးရောင်ရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/bacterial-meningitis.html
3. Mencevax ကာကွယ်ဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/mencevax.html
4. Meningitis ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/meningitis.html
5. Meningitis ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/meningitis.html
6. Meningococcal meningitis မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဦးနှောက်မြှေးရောင်ရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/meningococcal-meningitis.html
7. Meningococcal meningitis မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဦးနှောက်မြှေးရောင်ရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/meningococcal-meningitis.html
8. Neisseria meningitides ဦးနှောက်အမြှေးရောင် ကူးစက်ရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/neisseria-meningitides.html
9. Pediatric Bacterial Meningitis ကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ ဗက်တီးရီးယား ဦးနှောက်မြှေးရောင်ရာဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/pediatric-bacterial-meningitis.html
10. Pneumococcal Vaccine နူမိုကော်ကယ်ကာကွယ်ဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/07/pneumococcal-vaccine.html
11. Pneumococcal Vaccine နူမိုကော်ကယ်ကာကွယ်ဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/07/pneumococcal-vaccine.html
၃။ ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်တော့ညာဘက်ချမ်းဗိုက်ကအောင့်အောင့်နေလိုဘာများဖြစ်နိုင်လိုလည်းသိ့ချင်လိုပါဆရာ ကျေးဇူးပြုပီးဖြေကြားပေးပါဆရာ ကျေးဇူပါဆရာ
ဆရာကျွန်တော့အသက်၃၂ပါဆရာ အရက်တပက်တခါသောက်ပါတယ်ဆရာ ဗိုက်အောင့်တာမကြာသေးပါဘူးဆရာ ခုဗီုက်အောင့်တာနဲ့အဆူခါးနားကပါအောင့်ပါတယ်
1. Abdominal Pain ဗိုက်နာတယ်ဆိုတာ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/abdominal-pain.html
2. Low Back Pain ခါးနာ သက်သာစေရန် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/low-back-pain.html?q=Lpw+back+pain
၄။ ဆရာရှင် ကျွန်မနားမလည်တာလေးတခုလောက်မေးချင်လို့ပါ ဆောင်းပါးတခုမှာဖတ်ရတာ UlTRASOUND ရိုက်တဲ့အကြောင်းလေးပါ ULTRASOUND ရိုက်ရင် ဘယ်ရောဂါတွေကိုသိနိုင်တာ ရှာနိုင်တာကိုပါ ဆောင်းပါးတခုမှာ အစာအိမ်ရောဂါ အူရောဂါကို မသိနိုင်ဘူးလို့ရေးထားပါတယ် ဟုတ်ပါသလား ကျွန်မတို့ ဆေးခန်းသွားလို့ ဗိုက်အောင့်တဲ့အခါမျိုးမှာရိုက်ပေးပါတယ် ဆရာဝန်က အစာအိမ်ရောင်တာ အူရောင်တာတို့ပြောပါတယ် ဖြေကြားပေးပါရှင်သိချင်လို့ပါ
ဆောင်းပါးကို ဆရာဝန်ရေးတာလား။ ဓါတ်မှန်အထူးကုရေးတာလား။ အစာအိမ်ရောင်ဆာနဲ့ အူရောင်တာ မတူ။ ဆေးစစ်ချက်မှာ ရောဂါအမည်ပါမယ်။ သည်အတိုင်းတော့ ပြောမရ။
1. Antral Gastritis အစာအိမ်ရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/antral-gastritis.html
2. Bleeding Peptic Ulcer အစာအိမ်နာ သွေးယိုခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/bleeding-peptic-ulcer_25.html
3. Duodenitis အစာအိမ်အထွက် အူသိမ်ရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/duodenitis.html
4. Gastric Juice အစာခြေအရည် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/gastric-juice.html
5. Gastritis အစာအိမ်ရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/gastritis.html?q=Lpw+back+pain
6. GERD (1) အချဉ်ရည် အထက်ဆန်ခြင်း (၁) https://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/gerd-1.html
7. Heartburn ရင်ပူခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/heartburn.html
8. Hiatal hernia ဟာနီယာတမျိုး Hiatal hernia ဟာနီယာတမျိုး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/hiatal-hernia.html
9. Hour Glass Stomach သဲနာရီအစာအိမ်ရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/hour-glass-stomach.html
10. Peptic Ulcer Diagnosis လေနာရောဂါကို ဆေးစစ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/peptic-ulcer-diagnosis_25.html
11. Peptic ulcer လေနာဆိုတာ ဘုရင်မှာလည်းဖြစ်သည် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/peptic-ulcer.html
၅။ မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်မသားလေး အသက်၎လရှိပါပြီ။ ယောက်ကျားလေးပါ။ အသက် ၁လခွဲလောက်ကစပြီး နှာခေါင်းထဲမှာ နှပ်ချေးဖတ်လေးတွေပိတ်နေ တက်ပါတယ်။ အသက် ၃လ ကျော်လောက်မှာအသက်ရှုမြန်ပြီး ချွဲသံပါကြားလို့ဆေးခန်းသွားပြတာ severe pneumonia ဆိုပြီးဆေးရုံတက်ရပါတယ်။ ဆေးရုံတက်နေစဉ်ကော ဆေးရုံကဆင်လာပြီးတော့လဲ နှာပိတ်တာ မသက်သာပါဘူး။ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးထဲမှာလဲ cetrizine ဆေးရည်လဲ ပါပါတယ်ဆရာ။ ဆရာဝန်က အခုဆေးတွေအကုန်ရပ်ခိုင်းလိုက်ပါပြီ ပန်းနာရင်ကျပ် ကာကွယ်ဆေးတမျိုးပဲ တလစာ တိုက်ခိုင်းထားပါတယ်။ အခုလဲနှာပိတ်တာ မနက်နဲ့ညဆို တခွီခွီနဲ့မြည်နေလို့ ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ အကြံပေးပါအုံးဆရာ။ အိပ်လဲအိပ်ပါတယ် နို့ဆို့တာလဲမပျက်ပါဘူးရှင်။
1. Common Cold in Children ကလေးတွေ အအေးမိရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/common-cold-in-children.html
2. Pneumonia in Children ကလေးများတွင်ဖြစ်သည့် နူမိုးနီးယားရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pneumonia-in-children.html
၆။ မဂ်လာပါဆရာ သမီး ဂျိုင်းအောက်နားမှာ ညှင်းအကွက်သေးသေးလေးတွေပေါက်နေလို့ပါ နောက်လထဲမှာ မီးဖွားဖို့လည်းရှိတော့ ကလေးကိုကူးမှာလဲစိုးပါတယ်ဆရာ Ketoconazole 20mg per 1gပါတဲ့ Nizoral cream ဆိုတဲ့ဆေးကို ၁ရက်၂ကြိမ်လိမ်းနေတာ တပတ်ပြည့်တော့မယ်ဆရာ သိပ်မသက်သာလို့ပါဆရာ ကိုယ်ဝန်နဲ့မို့ သောက်ဆေးကလည်းမသောက်ရဲတော့ လိမ်းဆေးဘဲ အားကိုးနေရပါတယ်ဆရာ ဆေးပြောင်းလိမ်းချင်ရင် ဘယ်ဆေးပြောင်းလိမ်းရမလဲဆရာ
Tinea Versicolor ညှင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/tinea-versicolor.html
တစ် ၁၁ လုံးကိုတော့ ပြင်လိုက်တယ်။ ဆောရီး။
Mud Pot အိုး နဲ့ ကြွက်
• မိုး နဲ့ သရက်၊ အိုး နဲ့ ကြွက်၊
• မိုးက ရွာမလိုလိုနဲ့ မရွာ၊ မထင်ဘဲနဲ့ ရွာတတ်တယ်။
• သရက်သီးဆိုတာ အပေါ်ယံဝင်းမှည့်နေပေမဲ့ ချို မချို မသိနိုင်။
• တွင်းဖေါက်ထားပေမဲ့ ကြွက်က တွင်းထဲမှာ အောင်းချင်မှလဲ အောင်းနေတယ်၊
• ကြွက်မိဘတွေကနေ ကြွက်ပေါက်တွေသာ မွေးတယ်။
Notalgia paraesthetica ဆိုတာ
Dear Sir အင်္ဂလိပ်လိုရေး မေးပါတယ်။ ဘာသာမပြန်တော့ပါ။
• Notalgia paraesthetica ဆိုတာ မွေးရပါရောဂါတခုဖြစ်တယ်။ Sensory neuropathy နာတာရှည် အာရုံခံကြော အာရုံကြောရောဂါဖြစ်တယ်။
• နေရာတခုမှာသာ ကွက်ဖြစ်တယ်။ ယားမယ်။ ပြန့်တာကနည်းတယ်။ လက်ပြင်ကြာ၊ နောက်ကျော်နဲ့ ပခုံးတွေမှာ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်ဘက်မှာ ပိုအဖြစ်များတယ်။ ဘာလို့ဖြစ်လဲ မသိပါ။
• ဆေးကုရာမှာ အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်။ Local anesthetics ထုံဆေးလိမ်းဆေး၊ Topical corticosteroids စတီရွိုက်လိမ်းဆေး၊ Topical capsaicin ငရုတ်သီးလိမ်းဆေး။
• Oxcarbazepine ဆေးကိုလဲသုံးတယ်။
• Paravertebral nerve blocks နောက်ကျောအာရုံကြော T3-T4 and T5-T6 intervertebral spaces နေရာကို ဆေးထိုးပေးနည်းလဲ လုပ်တယ်။
• Hydroxyzine HCL စားဆေးနေ့တိုင်းပေးနည်းလဲ လုပ်တယ်။
• Medical Cannabis ကိုလဲသုံးတယ်။
• Botulinum toxin type A (Botox) ကို အရေပြားထိုးတာလဲ လုပ်တယ်။
• Topical antipruritic compounds အယားသက်သာဆေးတွေထဲမှာ camphor and menthol ပရုပ်ပါတယ်။
• Gabapentin ကိုနာတာအတွက်သုံးတယ်။
• အခြေခံမှာ Cervical disease လည်ပင်းရိုးဆစ်ရောဂါရှိနေ-မနေစစ်ရ၊ ကုသရမယ်။
Time Wasting အချိန်ကုန်စေတဲ့ မေးခွန်းတွေ
၁။ ဆရာ မြန်မာပြည်မှာ တော်တော်လေး သုံးနေကြတဲ့ဆေးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ ကလေးမွေးရင် ကလေးမှာ လေနာပါမှာစိုးလို့တဲ့ဆရာ။ မသုံးသင့်သုံးသင့်နှဲ့ဒီဆေးရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး အများသိအောင် ပိုစ့်တင်ပေးပါလားဆရာ။ ဆရာကျန်းမာပါစေ။
အဲလိုဟာတွေ ခဏခဏမေးကြလို့ ခဏခဏရေးတင်ထားပြီး။ တိုင်းပြည်ပေါင်း ၁၉၆ နိုင်ငံမှာ အဲလိုဆေး ဘယ်မှာသာ ရှိသလဲ။ အဲဒီဆေးဆိုတာပေါ်တာ မကြာလောက်သေး။ ကလေးပေါင် ဘီလီယန်များစွာ မွေးထားပြီး။ အချိန်ကုန်စေတဲ့ အရာသာဖြစ်တယ်။ သူများစီးပွါးရေးတော့ အားနာပါတယ်။
၂။ ဆရာ ခါးနာတာနဲ့ ခါးညောင်းတာ တူပါသလားဆရာ
မသိပါ။ တယောက် တမျိုး ပြောကြတယ်။
၃။ ဆရာကျမအသက် ၂၅ နှစ်ပါ ဓမ္မတာနဲ့ပတ်သက်ပီးမေးပါရစေဆရာ အတူနေဖြစ်ပါတယ်ဆရာ အရင်ကအင်္ဂလိပ်ဆေးတားဆေးသုံးတာ နောက်ကျ ကေသီပန်မြန်မာဆေးသုံးနေတာပါ ခုဓမ္မတာမလာတာ ၁ ပတ်ကျော်သွားပီ ဆေးအညွှန်းအတိုင်း ၂ ခွက်စာတွေသောက်နေတာတပတ်ရှိပြီဆရာ ခုထိမလာသေးတာဆရာ ကျမဘာဆက်လုပ်သင့်ပါလဲ ဆရာကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါနော်
အရပ်ဆေးတွေကို ဆရာဝန်တွေက မသုံး၊ မသိ။ ဆီးစစ်ရင် သိ။ သူများစီးပွါးရေးတော့ အားနာပါတယ်။
၄။ ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျမှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အစားအစာများ ၁ မှ ၁ဝ။ အထက်ပါအကြောင်းအရာများသည် ဟုတ်မှန်ပါသလား ဆရာခင်ဗျား အယူအဆမလွဲအောင်လမ်းညွှန်ပေးပါခင်ဗျာ လေးစားစွာဖြင့်
အဲလိုဟာတွေ ခဏခဏဖြေနေရတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချင်သူတွေကလည်း နေ့တိုင်းမေးနေကြတယ်။ အဲဒီနည်းတွေထဲက ကော်ဖီသောက်ခိုင်း၊ ရေနွေးကြမ်းသောက်ခိုင်း၊ နာနတ်သီးစားခိုင်းရမလို။
အိုဂျီတဦးကရေးတာ မဟုတ်ရင် အကုန်မှားတယ်။ အဲလိုဟာတွေအတွက် အချိန်ကုန်ရတယ်။ သူများစီးပွါးရေးတော့ အားနာပါတယ်။